မမနာမည်ကတော့ သိမ့်ဟေနဒီကျော်ပါ။ ခုလက်ရှိ သင်ယူနေတဲ့ ဘာသာကတော့ သတင်းအချက်အလက်နဲ့နည်းပညာ (ခေါ်) Information Science & Technology ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်နေဆဲ တက္ကသိုလ်ကတော့ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး (UT-YCC) မှာပါ။ မမတို့ရဲ့ တက္ကသိုလ်တည်နေရာက မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင် အတက်လမ်းဘေး ပြင်စာရွာမှာ ရှိပါတယ်။
ဒီဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်ဖြစ်တာကတော့ ‌တိုးတက်လာမယ့် နည်းပညာကို သင်ယူစေချင်တဲ့ အမေ့ကြောင့်ပါ။ မမတို့ နှစ်တုန်းက ဒီတက္ကသိုလ်စတင်ဖွင့်လှစ်ဝာာ ငါးနှစ်မြောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ လူတွေ သိပ်မသိကြသေးဘူးပေါ့နော်။ ၁၆ နှစ်ရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိဘရင်ခွင်နဲ့ မခွဲချင်လို့ အဝေးကြီးမှာ ကျောင်းမတက်ချင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း လောကကိုရင်ဘောင်တန်းပြီး နှစ်အတော်ကြာမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံ‌တွေအပြင် အဝေးမှာနေရလို့ ရင့်ကျက်လာခဲ့တဲ့အဖြစ်ကတော့ အသိမှတ်မပြုလို့ မရခဲ့ပါဘူး။
မမတို့ ကျောင်းမှာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ မေဂျာကြီး (၄)ခု ရှိပါတယ်။
1. Information Communication and Technology
2. Electronics communication Engineering
3. Advanced Material Engineering နဲ့
4. Precision Engineering စတဲ့ ဘာသာရပ် လေးမျိုးထဲက ‌ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ ဘာသာရပ်တစ်မျိုးကို လေ့လာသင်ယူလို့ရပါတယ်။
မမကဝောာ့ ICT မေဂျာကိုယူခဲ့ပြီး programming၊ datastructure ၊ networking အစရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေရဲ့ knowledge တွေ အကုန်လုံးကို ၂ နှစ်အတွင်း သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ Third year ရောက်တဲ့အခါမှာ Information Science (IS) နဲ့ Computer Engineering (CE) ဆိုပြီး ‌၂ မျိုး ပြန်ခွဲခဲ့ပါတယ်။ မမယူခဲ့တဲ့ IS major မှာဆို software ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် software ရေးသားရမှာ အခရာကျတဲ့ programming ဘာသာရပ်တွေအပြင် Algorithm တွေ Database ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ project management လို ဘာသာရပ်မျိုး၊ IT Business ပိုင်းတွေထိပါ စာတွေတစ်ဖုံ၊ လက်တွေ့တစ်မျိုး ကွင်းဆင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့ရသလို Internship Activity တွေနဲ့ပူးတွဲပြီး လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ကို မျက်ခြေမပျက်စေဘဲ အတွေ့ကြုံရင့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေက အကောင်းဆုံးသင်ကြားပေးတာမို့ တကယ့်ကို Digital ခေတ်မှာ လိုအပ်တဲ့ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေနဲ့ ရင်းနှီးချင်ရင် မမတို့ကျောင်းကို လာခဲ့လို့ရပါတယ်။ ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ မောင်လေး၊ ညီမလေးတို့အနေနဲ့ မမပြောသွားတဲ့ မေဂျာဘာသာရပ်အကြောင်းကို ပိုပြီး သိချင်လို့ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းတက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အတွင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ အဆောင်ကိစ္စတွေ ကျောင်းကိစ္စတွေ သိချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် မမကို အချိန်မရွေး မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ ရာသီဥတုအေးတာ သဘောကျရင်တော့ အရမ်းနေပျော်မှာပါ။ ချယ်ရီပင်တွေနဲ့လည်း နီးသလို စတော်ဘယ်ရီချဉ်စိမ့်စိမ့်လေးတွေ ပေါတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးက နွေး‌ထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
Content : Phoo Pwint Khaing